Niroso saingy nanamafy ny Ni…Ni - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Nangonin'i JRR il y a 8 mois
Ry Malagasy mpiray tanindrazana
Nambaran’ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana tamin’ny alarobia teo ny vokatry ny fifidianana fihodinana voalohany ho filohampirenena.
Nanana an’izay nambarako tamin’izany aho sy ny vondrona rehetra nanohana ahy dieny ny ampitson’ny fifidianana izany hoe ny 8 novambra izany. Mila hajaina ny safidim-bahoaka satria ny fifidianana irery ihany no fotoana hanehoan’ny tsirairay ilay zo masina hisafidianany izay hitondra ny Firenena. Raha sanatria mantsy ka tsy voahaja izay zo izay dia tsy ho marin-toerana izay fitondrana hijoro avy eo.
Nanaraka ny lalàna isika. Nametraka fitarainana mifanandrify amin’izay nahitantsika mikasika ny fifidianana saingy tsy nisy vokany izy ireny.
Eto aho dia misaotra ny Vahoaka Malagasy izay nifanohana tamiko nandritra izay 5 taona izay. Ary mamela ahy ianareo hisaotra manokana an’ireo rehetra nametraka ny fitokisanareo tamiko tamin’ny vato izay nalatsakareo tamin’ny fifidianana farany teo.
Mankasitraka anareo rehetra “mangamanga ny sary” niaraka amin’ny “marika niarahantsika nanao tamin’ny ankihibentsika”. Endriky ny fanantenantsika ireny sady fanajantsika ihany koa ny lalàna sy ny fahamarinana.
Afo tsy mety maty na ho vonoina ireny ary inoako fa hanamafy hatrany ny fiarahantsika amin’ny ho avy
Mijoroa hatrany ho amin’ny fitiavan-tanindrazana.
Betsaka ny fanamby nataoko ho fanavotana ny firenentsika.
Misy ny vita sy tanteraka, misy ny eo andalam-panatanterahana.
Misy ny tsy tanteraka noho ny antony samy hafa raisiko ho andraikitro ny zavatra vita sy ny tsy vita
Tsy misy ny tonga lafatra. Mety misy ny lesoka amin’ny mahaolombelona. Ialan-ko tsiny aminao raha nandratra ny fonao sy ny fijerinao izany.
Maro koa anefa ny lesona notsoahiko, toko tapaka vilany mitongilana izay tsy mety arenina.
Ezaka lehibe vitantsika ny fanehoana amin’ny Vahoaka Malagasy rehetra sy eo imason’izao tontolo izao fa tsy voatery ho krizy politika sy fibodoan-toerana hatrany no mamarana ny fe-potoam-piasan’ny Filoham-pirenena eto amintsika.
Noporofointsika tamin’ny fanarahan-dalàna sy ny fanajana ny soatoavina mahamalagasy sy ny soatoavina repoblikana eto amin’ity firenena ity izany ka nametrahako fialana manaraka ny lalàna sy ny Lalampanorenana.
Nanome ohatra hatrany isika fa azon’ny mpitondra atao tsara ny miloloha ny tombontsoa ambonin’ny Firenena.
Manentana ny Malagasy tamin’izany aho ary nifanentana tamin’izany isika.
Izany no antony naha tonga ahy nijoro hatrany tamin’ny fanarahan-dalàna tamin’ny fametrahana ny fifampitokisana amintsika samy Malagasy. Nahatonga namolavola sy nametraka vinam-pampandrosoana izay hany lalana azo inoana fa tena hiantoka ny fihatsaram-piainana maharitra ho an’ny Vahoaka Malagasy rehetra indrindra ireo maro an’isa manerana ny Nosy.
Efa nanalavitra ny kizo sy ny lavaka lalina nisy azy hatramin’ny taona 2013 i Madagasikara ankehitriny.
Efa mizotra amin’ny lalan’ny fahombiazana sy ny fanarenana ifotony ny fiainam-bahoaka.
Mipetraka eo amin’ny tantara ary tsy afaka misaraka amin’ny asa mbola ho tanterahina eto amin’ity firenena ity ny fotodrafitrasa fototra sy ny fitsinjaram-pahefana ara-toekarena izay tena fototry ny fitsinjaram-pahefana.
Tandrovy ny asa efa vitantsika ry vahoaka malagasy
Hajao ny fananana sy ny soa iombonana.
Mbola maro ireo fotodrafitrasa fototra sy asa goavana izay natombotsika no ho vita ato anatin’ny taona maromaro hoavy.
Samia saropiaro amin’izany. Voleo eo anivon’ny fiarahamonina ny fahendrena.
Aoka hifanabe isika hitsinjo ny taranaka, hiady amin’ny kolikoly ny kiantranoantrano, ary hitandro mandrakariva ny tombontsoan’ny maro an’isa.
Isan’ny paikady ataon’ny fahavalom-pirenena ny fampiadiana ny samy Malagasy, noho ny resaka politika, ny fanakalozana ny tsikalakalam-pihavana amin’ny tsikalakalam-bola, ny fanimbazimbana ny soatoavina ka tsy isian’ny fifanajana intsony eo amin’ny ray aman-dreny sy ny zanaka, ny mpitondra sy ny vahoaka, ny mpitantana sy ny entina, ka namotika ny fiarahamonintsika.
Noporofointsika anefa fa azo ovaina izany ary azo resena izany.
Aoka ho saropiaro amin’ny fiarovana ny zava-bita hoy aho satria ny tsy fisian’ny fitohizan’ny fampandrosoana no mampihemotra hatrany ny firenentsika tao anatin’ny ampolo taona maro.
Noresentsika tamin’ny fandeferana sy ny falem-panahy ny asa fanakorontanana sy ny fanembatsembanana rehetra izay nosendraintsika miaraka.
Tsy mora ny miatrika an’ireny :
- ireo olana novolena novahana
- ireo olana nolovaina nosahanina
- ny faharavan’ny foto-pisainana natrehina
- ny hoavy ihany koa anefa tsy maintsy notsinjovina
Tsoriko etoana ry Vahoaka Malagasy, fa noho ianao, noho ny tombontsoan’ireo valala tsy mandady harona ny soa iombonan’ny fiarahamonintsika dia ny “filaminana sy fitoniana” ireo no hery nanampy ahy hitandro ohatry ny anakandriamaso ny firaisampirenena sy ny filaminan’ny firenena.
Imbetsaka aho no nilaza fa mila miova toetsaina isika entintsika mampandroso an’i Madagasikara.
Toetsain’ny Vina Fisandratana hoy aho. Mila Gasy tena tia tanindrazana ity firenena ity
Mila fotoana ny fanarenana sy fampandrosoana ny firenena izay efa latsaka lalina loatra tao anatin’ny fahantrana.
Efa nijoro ho raiamandreny aho nandritra ny fotoana nitondrako ny firenena, ary mbola hijoro ho raiamandreny hatrany.
Noho izany dia nanapa-kevitra aho fa hijanona amin’izay maha raiamandreny ahy izay ka tsy hiandany amin’ny iray amin’izy mirahalahy mianaka hanao ny fihodinana faharoa
Maniry aho noho izany mba hitondra filaminana sy fitoniana ho an’ny firenentsika ity fifidianana fihodinana faharoa ho avy ity.
Niarahana nahita ireny tsy fahatomombanana rehetra nitranga tamin’ny fihodinana voalohany ireny, fanirian’ny Vahoaka Malagasy ny tsy hiverenan’ireny intsony amin’ny fihodinana faharoa koa manainga an’ireo tompon’andraikitra ary indrindra isika olom-pirenena hijoro ho saropiaro ka hiaro ny safidintsika.
Samia ho tahin’Andriamanitra Tompoko
(Lahateny nataony ny 30 novambra 2018)
Antanetibe Mahazaza : "Ny fanasoavana olona no manentana ahy" hoy Dr Firmin - il y a 8 jours
Légilsatives : Liste des députés élus - il y a 15 jours